गजल:- "आँमा" (२०७४ वैशाख २०, बुधवार)
चुलाको आँगोमा,आफैलाई तपाउछिन आँमा.!!
छोरा-छोरीको गल्ती,आफैमाथी ल्याउछीन आँमा.!!
दुध रोटी देखी लीएर, स्कुल कलेज सम्मको सफर,
ममता र स्नेहको चाँसनीमा, घुलाउछीन आँमा.!!
आँधी हुरी झरी वतास वाट, बचाउनको लागी,
आफैलाई भीजाएर छोरा-छोरी बचाउछीन आँमा.!!
बच्चाहरू बिग्रेलान भनी,गाली गरे झै गरी,
आफैलाई रूलाएर,उन्लाई आदर्शवादी बनाउछीन आँमा.!!
बेलुका भई सक्यो,अझै आउदैनौ कीन..?"
फर्की आईदेउ अब, तिम्लाई बोलाउछीन आँमा.!!
[[२"चुलाको आँगोमा आफैलाई तपाउछीन आँमा.!!
छोरा-छोरीको गल्ती,आफैमाथी ल्याउछीन आँमा.२"]]